Leo Damrosch Review: Biography Post-MeToo an'i Casanova | boky biography - World Book
Leo Damrosch Review: Biography Post-MeToo an'i Casanova | boky biography
Enga anie 20, 2022 ny worldbook
Giacomo Casanova, ilay mpamitaka an'ny Enlightenment Europe, dia tia nihevitra ny tenany ho serivisy sosialy. Na manao cavor ao anaty gondole izy io, na manao firaisana amin'ny vehivavy roa miaraka (tsara ny anabavy, tsara kokoa ny reny sy ny zanany vavy), na ny fiarahana amin'ny tovovavy mody castrato (nampivadika azy ny fiakanjo cross). nanizingizina ny zon'ny tsirairay hiaina fahafinaretana. Araka ny voalazan'i Histoire de Ma Vie, ilay tantaram-piainan'ny lehilahy lehibe sy tena lehibe navelany fony izy maty tamin'ny 1798, dia zara raha nampiasa herisetra na fanerena i Casanova. Ny zavatra ratsy indrindra mety hitarainan'ny mpivady dia ny blues postcoital sasany izay naharitra mandra-pahatongan'ny firaisana ara-nofo manaraka hanesorana azy.
Fantatr'i Leo Damrosch, mpanoratra tantaram-piainana, fa mamitaka izany rehetra izany. Sarotra ny mahita hoe ny lehilahy lehibe iray izay matetika mandry amin'ny tovovavy tena kely (10 taona no taona azo ekena) dia azo heverina ho toy ny pedophile ankehitriny. Ny fanamafisan'i Casanova fa ny zava-drehetra dia tsy miraharaha na manafoana ny fihetsehan'ny hery feno habibiana. Na dia tsy niara-natory tamin’ny mpivaro-tena aza izy tamin’ny ankapobeny, dia matetika izy no nandry tamin’ny ankizivavy nivaro-tena tamin’ny ray aman-dreniny na ny mpiaro azy ho takalon’ny tombotsoa, ​​fisondrotana, tombontsoa, ​​na kitapom-bola be mihitsy aza. Ny aretin'ny taovam-pananahana (tsy nety nampiasa fimailo izy na, araka ny filazany hoe, "nofonosina hoditra maty") dia tsy loza fotsiny fa mety ho fitaovam-piadiana indraindray. Ary rehefa nitranga ny tsy azo ihodivirana ary niteraka an'i Casanova, dia nitandrina izy mba tsy hisy ifandraisany amin'izy ireo. Indray mandeha, dia niafara tamin'ny torimasony niaraka tamin'i Leonilda zanany vavy izy, izay niteraka zaza iray izay, mazava ho azy, fa zafikeliny ihany koa.
Efa nisy tantaram-piainan'i Casanova maro teo aloha, ny sasany amin'izy ireo dia tena tsara, na dia nirona tamin'ny foto-kevitra izy ireo: Lydia Flem, psychoanalyst, dia nanamboatra Casanova izay nahatakatra tsara ny vehivavy, raha i Ian Kelly, mpilalao sarimihetsika, mpanoratra, dia nanolotra azy ho mpilalao virtuoso. . amin'ny sehatra sosialy. Damrosch, mpahay tantara momba ny literatiora Harvard, dia mazava ihany koa fa manoratra lahatsoratra-MeToo Casanova izy. Etsy an-danin’izany, dia tiany ho takatsika koa hoe hatraiza ny tantara dia antontan-taratasy sarobidy ho an’ireo mpikaroka miasa amin’ny taonjato faha-XNUMX. Vao tsy ela akory izay no nahitana azy manontolo ary, na dia eo aza ny singa hafahafa sasany, dia porofo tsy mbola nisy hatrizay ny toe-tsaina ara-tsosialy, ara-politika ary ara-tsaina amin'izao fotoana izao.
Niezaka ny ho pretra mianatra, mpilalao loteria ary mpitendry lokanga orkestra i Casanova, talohan'ny nigadrany.
Damrosch's Casanova no voalohany indrindra fa materialista izay mino fa izao tontolo izao azo kitihina sy hita no hany zava-dehibe: Andriamanitra, na dia manampy amin'ny fitazonana ny vahoaka amin'ny filaminana aza, dia nandray anjara kely tamin'ny fisainany. Raha nisy zavatra nahatsapa tsara (sakafo, tit, akanjo tsara), dia mendrika ny hanandrana izany. Na izany aza, izy koa dia mpanohana matanjaka ny modely ara-pananahana "vatana iray", izay nihevitra fa ny vehivavy dia mitovy tanteraka amin'ny filan'ny lahy sy ny vavy (ny fiheverana azy ireo ho anjely asexual dia hihazona ihany amin'ny vanim-potoana Victoriana). .
Amin'ny ankapobeny, asehon'i Damrosch ny fomba nahafahan'ny sisintany tsy mitovy tamin'ny Eorôpa tamin'ny taonjato faha-XNUMX namela mpanao heloka bevava toa an'i Casanova hifindra avy amin'ny fari-piadidiana iray mankany amin'ny iray hafa, hanova ny anarany, ny bika aman'endriny, ary ny antsointsika ankehitriny hoe "profil" rehefa nandeha avy amin'ny faritra iray izy. ho an'ny iray hafa Venezia niaviany nankany Naples ka hatrany Barcelone ka hatrany Londres sy Saint-Pétersbourg. Raha ny amin’ny asa kosa, dia nanandrana ny tanany ho pretra mpianatra, mpihazakazaka loteria, ary mpitendry lokanga tao amin’ny orkesitra iray izy talohan’ny niafarany tamin’ny naha voafonja nanefa sazy an-tranomaizina dimy taona noho ilay fandikan-dalàna somary manjavozavo momba ny “tsy fivavahana”.
Teo amin'ny faha-40 taonany, i Casanova sy ny Tantarany dia lany tamingana. Taorian'ny am-polony taona maro nanaovana firaisana ara-nofo, dia nanomboka nitambatra ho iray ny fandreseny rehetra. Ny asa farany nataon'i Casanova dia ny maha-mpitantana ny tranombokin'i Count Waldstein. Tany Bohemia no nisy ny lapam-panjakana, izay toa nampanantenaina kokoa noho ny teo aloha. Ny roa ambin'ny folo taona farany teo amin'ny fiainan'ilay mpamitaka lehibe dia lany tao anatin'ny tsy fitoniana mitaraina momba ny tantsaha ao an-toerana, izay heverin'ny olona fa tsara lavitra noho izay mendrika azy.
Adventurer: The Life and Times of Giacomo Casanova dia navoakan'i Yale (£25). Mba hanohanana ny libromundo sy The Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.
Famerenan'i Georgi Gospodinov's Time Shelter – ny loza ateraky ny fiainana taloha | Fiction
Ny Future Library dia manokatra tahiry miafina amin'ireo lahatsoratra tsy hita maso ao Oslo | tranomboky ny ho avy